मधेश आन्दोलनमा ५० लाखको अफरदिने मधेशवादी दल भन्छन् : ‘घरघडारी बेचेर मुद्दा लड’ – Shirish News
महेन्द्रनगर- तेस्रो मधेश आन्दोलन सकिएको तीन वर्ष भइसक्यो तर त्यो आन्दोलनको घाउ अझै सुकेको छैन ।
अहिले प्रदेश नम्बर दुईमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी, नेपाल (तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको संयुक्त सरकार रहेको छ भने केन्द्रमा समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारमा सहभागी छ । तैपनि, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवार र घाइतेहरु सहयोगबाट वञ्चित छन्् । आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरु अदालत धाउन बाध्य छन् ।
तीन युवा दीपक कुशवाहा, शम्भु साह र विनोद साह आन्दोलनमा सक्रियरुपमा सहभागी भए । तर, अहिले उनीहरुको विचल्ली भएको छ । आन्दोलनको क्रममा आगजानीको मुद्दा लागेका उनीहरु न्यायका लागि काठमाडौँमा नेताहरुको घरघर धाइरहेका छन् । तर, सहयोग पाउन त कहाँ हो कहाँ नेताहरुको रुखो जवाफले गर्दा निराश भएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘के यसैका लागि हामीले आन्दोलनका गरेका थियौँ ?’
भेटमा आफूहरु मुद्दा हारेको र पुनरावेदनका लागि धेरौटी राख्न रकम नभएको बताउँदै त्यसका लागि सहयोग गर्न उनीहरुले आग्रह गरेपछि सहअध्यक्ष कर्णले ‘तिमीहरु आफ्नो घरजग्गा बेचेर पनि मुद्दा लड्न सक्छौँ नि ! त्यी बेचेर मुद्दा लड,’ भन्ने जवाफ दिएको दिएका थिए ।
२१ दिनसम्म थुनामा रहेपछि दीपक अदालतमा ४६ हजार धरौटी राखेर रिहा भएको थिए । रिहा भएको दिन जिल्ला स्तरका सबै नेताहरु भेट्न आएका थिए । त्यतिबेला पनि सबैले केही नहुने आश्वासन दिए । ‘राजपाका जिल्ला अध्यक्ष संजय सिंहले देखाउनु भएको बाटोमा हिँडे । अदालतमा मुद्दा चल्न थालेपछि तारेख लिन थाले,’ उनी भन्छन्, मुद्दा प्रायः पेसीमा नै चढ्थ्यो फैसाल कहिले हुने हो थाहा थिएन । हामीलाई डर पनि लाग्थ्यो । तर नेताहरु भन्नुहुन्थ्यो न डराउ सबै मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।’
अन्तिम पेशीको दिन प्रदेश २ का प्रमुख न्याधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई पनि उनीहरुले भेटेका थिए । न्यायधिवक्ताले झाले पनि ‘तिमी चिन्ता नगर, न्यायाधीश आफ्नै फेवरका मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँलाई मैले एक कल गरेपछि तिमीहरु जित्छौ चिन्ता नगर,’ दीपक भन्छन्, ‘दीपेन्द्र झाको यस्तो कुरा सुनेपछि हाम्रो खुशीको सीमा थिएन । हामी उहाँलाई नमस्कार भनेर हाँस्दै निस्केका थियौँ । तर सबै उल्टो भइदियो । हामीले मुद्दा हार्यौँ ।’
पछि न्यायधिवक्ता झालाई सम्पर्क गर्दा उनले ‘आफूले त फोन गरेर भनेको त हो तर भएन । के गर्ने ? अब जे गर्छन् नेताहरुले गर्छन् । अब नेताहरु कहाँ जानु’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
तर, हिजो भेट्न जाँदा महतोले चिन्न गाह्रो मात्र मानेनन्, आफ्नो कार्यकक्षबाट बाहिर बस्न समेत भनेको उनीहरुले गुनासो गरे । उनीहरुले यस विषयमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु महन्थ ठाकुर र शरतसिंह भण्डारीसँग पनि भेटेका छन् । जवाफमा दुवै नेताले यस विषयमा पार्टीमा सल्लाह गरेर जवाफ दिने आश्वासन दिएका छन् । ‘अब आश्वासन मात्र दिएर भएन,’ अबको १०–१५ दिनमा केही गर्न सकिएन भने जेल बस्नुबाहेक अरु कुनै उपाय नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
धनुषा महेन्द्रनगरका उनी तीनैजना प्लस टु पास गरेर बसेका छन् । २०७२ असार ७ गते ‘चलु ढल्केबर, भरु ढल्केबर’ कार्यक्रमको आयोजना थियो । सोही कार्यक्रमको दिन तेल बोकेर गइरहेको मटरसाइकमा आगो लगाइएको थियो । जसको मोटरसाइकल जलेको थियो, ती व्यक्तिले आफूहरुलाई चिनेको भरमा अदालतमा मुद्दा हालेको ती युवाहरुको दाबी छ । ‘त्यो दिन हामीहरु त्यहाँ थिएनौँ । तर, आन्दोलनमा गइरहने भएर होला जानीजानी आफूहरुमाथि मुद्दा लगाइयो,’ उनीहरुको गुनासो छ । यदि मधेशवादी दलले सहयोग नगरे पार्टी कार्यालयमा आमरण अनसन बस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।-रुातोपाटी